I-Mini Groove Deep Ball Bearings Eyaziqeda - I-Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
I-mini Groove Deep Ball Bearings Isusa
I-miniature Deep Groove Ball Bearings Ukubeka imvume
Isivinini esikhulu se-micro-depth groove ball esithwala ukuvunywa, esaziwa nangokuthi iyabhalwa. Okubizwa okuthiwa yi-bearing bearing, okungukuthi, lapho ukufakelwa kungafakwa efomini noma ebhokisini eliphethe, indandatho yangaphakathi noma ibhande langaphandle lezintambo lihleliwe, kanti ukunikezwa kwemvume akuyona ingxenye eqondile yokunyakaza kwe-radial noma kwe-axial yenani Ukunyakaza Ngokusho kokuqondisa kokuhamba, kungenziwa ukwahlukaniswa kwemoto kanye nokunikezelwa kwempahla. Ubukhulu bezimvume (okubizwa ngokuthi imvume yokusebenza) ngesikhathi sokusebenza kuthinta ukuphila kokukhathala okuphilayo, ukushisa kwamazinga okushisa, umsindo, ukudlidliza nezinye izakhiwo zokuthwala. Singaba i-cylindrical kanye ne-oval emise okwenziwe nge-backlash, ingasetshenziswa ngesandla-ukugaya noma ukufaka ngaphansi kwe-surface kanye nokulinganisa ngemuva kokugaya indlela yokulungisa. Ukusetshenziswa kwamabherethi
Ama-rolling bearings ayizingxenye ezicacile, ngakho-ke zidinga isimo sengqondo esifanayo esisebenzisayo, kokubili ukusetshenziswa kwezingubo zokusebenza eziphezulu, uma kusetshenziswe ngendlela engafanele, ngeke ukwazi ukufeza imiphumela yokusebenza oyifunayo, ngakho ukusetshenziswa kwamabherethi kufanele kuqaphele lokhu okulandelayo:
â-², ukugcina ukuphathwa kanye nemvelo ezungezile zihlanzekile. Ngisho noma uthuli oluncane olungabonakali lubekwe ekuthwaleni, luyokwandisa ukugqoka, ukugubha nokuzwakala.
â-², ukusetshenziswa kokufakwa ukuze uqaphele, ungavumeli ukugxilwa okuqinile, ungavumeli isando sishaye ngqo, asivumeli ukudluliswa kwengcindezi emzimbeni ohambayo.
â-², ukusetshenziswa kwamathuluzi okufaka afanelekayo anembile, zama ukusebenzisa amathuluzi akhethekile, zama ukugwema ukusebenzisa indwangu kanye nefayibhile emifushane nokunye okunjalo.
â-², ukuvimbela ukubola kwesibalo, ukuthatha i-bearings ngesandla ngesandla, ukugeza ngokugcwele isithukuthuku ngesandla, nokugcoba ngamafutha aphezulu amaminerali bese usebenza ngenkathi yemvula nasehlobo, ikakhulukazi, kufanele qaphela ukugqwala.
Ububanzi obuphakathi nobubanzi obungaphandle ububanzi bokuthwala okuqhutshwayo kwenziwa ngokuvumelana nokubekezela okujwayelekile. I-tightening degree ye-ring ring yangaphakathi kanye ne-shaft, indandatho yangaphandle kanye nomgodi wokuhlala ungatholakala kuphela ngokulawula ukubekezelelana kwephephabhuku nokubekezelelana komgodi. Ukufaka indandatho yangaphakathi kanye ne-shaft nge-hole system, ukufaka indandatho yangaphandle kanye nokuhlala ngokusetshenziswa komshini wokushisa umshini.
Ukukhetha okulungile kokubambisana, kufanele sazi izimo zokulayisha, ukushisa okusebenzayo nezinye izidingo, kodwa empeleni kunzima kakhulu. Ngakho-ke, amacala amaningi asekelwe ekusetshenzisweni kokukhethwa kwe-lapping.
â-², usayizi wokulayisha
Inani lokuphazamiseka phakathi kwendandatho ne-shaft noma igobolondo incike ngobukhulu bomthwalo, umthwalo okhudlwana usebenzisa ukunqoba okukhulu, futhi umthwalo wokukhanya usebenzise ukunqoba okuncane.
I-Deep Groove Ball Bearings Ngokusho Kokubunjwa